Madaxweynaha maamulka Khaatumo oo guul ka sheegtay dagaalkii shalay ka dhacay Xudun (Dhegayso). – Radio Daljir
Nofeembar 29, 2012 3:21 b 0
Taleex, Nov 29, M/weynaha maamulka Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac ?(Indhasheel) oo xalay la hadlay barnaamijka Caawa iyo Daljir oo habeen walba ka baxa Idaacadda Radio Daljir ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii shalay ka dhacay degmada Xudun ee gobolka Sool.
Indhasheel wuxuu sheegay in sadex gaari oo kuwa dagaalka ah ay waxyeelo ka gaarsiiyeen maamulka Somaliland, sidoo kale wuxuu tilmaamay afar goobood oo dagaalku ka dhacay sadex kamid ah inay la wareegeen ciidamada maamulka Khaatumo oo garab ka helay shacab hubaysan oo deegaanka iska abaabuley.
Wuxuu sheegay in dagaalku sii socon doono inta maamulka Somaliland gardarada ku joogo gobolka Sool,” Dagaalku waa sii socon doonaa inta ay gardara qaawan ku joogaan maamulka Hargeysa” ayuu yiri Maxamed Yuusuf Jaamac “Indhasheel”
Sidoo kale wuxuu sheegay in wax khasaare ah aysan soo gaarin ciidama Khaatumo iyo dadka deegaanka dagaalkii shalay ka dhacay Xudun ,” Farsamada aan dagaalka u galay ayaanu ugu tala galay inaan wax khasaare ah nasoo gaarin ama uu yaraado markaa wax khasaare ah anaga nama soo gaarin” ayuu hadalkiisa raaciyey.
M/weynaha maamulka Khaatumo wuxuu sheegay in deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn aysan ka dhicin wax doorasho ah oo uu wato maamulka Somaliland marka laga tago magaalada Laascaanood oo uu sheegay inay si khasab ah ku joogaan.
“Deegaanada Khaatumo wax doorasho ah kama dhicin marka laga reebo magaalada Laascaanood oo ay si khasab ah ku haystaan” Maxamed Y Jamac (Indhasheel).
Xudun oo ah degmo ka tirsan gobolka Sool ayaa shalay waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo Ciidamada maamulka Khaatumo oo garabsanaya kuwa shacabka deegaanka.